⭐Ocean Front - Imihlobiso Ebuyekeziwe, Esanda Kwengezwa! - I-Airbnb
⭐Ocean Front - Imihlobiso Ebuyekeziwe, Esanda Kwengezwa!
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Julie
Okusanda Kulungiswa Futhi Kwabuyekezwa!
Amabhishi, amachibi, nezindawo zokudlela sezivuliwe! Le condo ihlanzwe ngokomsebenzi futhi sinokungena ngaphandle kokuthinta!
Lena indawo okungezona izilwane ezifuywayo, i-condo engabhenywa.
Izici ezibalulekile zale condo zifaka:
* OKUSHA KUKHISHIWE FUTHI KWABUYEKEZWA!
* Qondisa i-Oceanfront e-Bay Watch Resort ku-5th Floor ene-Private Balcony!
* Imibhede eyi-Queen emi-2, Isofa yokulala engu-1, Umbhede ongu-1 we-Murphy, Ulala kufika ku-8, amashidi anikeziwe
* Ikhishi Elihlonyiswe Ngokugcwele, Netafula Lekhishi
* 2 Omabonakude ABAKHULU be-Samsung LCD!!!
* I-Wi-Fi YAMAHHALA enesivinini esiphezulu
* Izinga Eliphezulu Lokuhlanza
* ⭐ "Ukubuka okumangalisayo okuvela kuvulandi, sizobuya nakanjani! " - Intando
* Umshini wokomisa izinwele
* I-Onsite Parking YAMAHHALA
* Amachibi angaphakathi nangaphandle, iLazy River kanye nama-Hot Tubs
* Amachibi ASHISAYO
* Ukuphepha kwe-24/7 Onsite, Isevisi yesivakashi ngombhalo, i-imeyili, noma ifoni
Ukubuka okumangazayo okuqondile kolwandle olungaphambili kusuka kuvulandi kuyisimo esifanelekile sekhofi lakho lasekuseni noma iziphuzo zakusihlwa. Jabulela ukunethezeka kwekhishi lakho elinefriji egcwele usayizi, i-microwave, ne-HDTV
⭐ "Sincoma kakhulu umndeni omncane!" - USusan
Ezinye izici ezimbalwa ezibalulekile:
* Amachibi Ezingane Angashoni Nezindawo Zokudlala
* Izinyathelo ezivela Ogwini!
⭐ "Indawo ekahle yomndeni wethu wabantu abane. Indawo ibilungile, nokubukeka bekukuhle." - UCharlotte
Imibhede emikhulu engu-2, 1 umbhede wosofa, Omatolasi abangu-1
4.68 · 38 okushiwo abanye
Izinsiza eziningi zikulindile kule ndawo engasebhishi. Izici zifaka phakathi ama-whirlpool angaphakathi nangaphandle, ukugibela emfuleni okuvilapha, indawo yokubhukuda evulekile, ibha ye-Tiki, nezindawo zomphakathi, amachibi ase-Oceanfront. Amachibi angaphakathi! I-Children Interactive splash nendawo yokudlala. KANYE OKUHLE KUKHO KONKE I-WIFI YAMAHHALA! Eduze kwe-Barefoot Landing kanye ne-House of Blues, i-Alabama Theatre! Ilungele imibhangqwana noma imindeni emincane, inekhishi / igumbi lokuhlala negumbi lokulala. Ilala abantu abangafika kwabayisishiyagalombili futhi cishe i-630 SF. Indawo yokungcebeleka inikeza izinsiza zezinkanyezi ezinokubukwa okumangalisayo kwe-Atlantic Ocean. Idekhi ye-Oceanfront pool, amachibi amane angaphakathi nangaphandle, ama-whirlpool amathathu, iLazy River. Woza uzobona ukuthi yini ekulindele kule yunithi ye-resort yasolwandle!
Ngilapha ngenxa yakho ngesikhathi uhlala futhi ngihlala e-Myrtle Beach. Izinga lethu lokusebenzisana likuwe ngokuphelele.Ngingumlayezo wombhalo, i-imeyili, noma ucingo olungekho. Uma usufikile uzokwazi ukuzihlola wena, sinokungena ngaphandle kokuthinta.
-> Sicela uqiniseke ukuthi ungeza uhlu lwami ohlwini lwakho lwezifiso ngokuchofoza ❤️ ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Ngilapha ngenxa yakho ngesikhathi uhlala futhi ngihlala e-Myrtle Beach. Izinga lethu lokusebenzisana likuwe ngokuphelele.Ngingumlayezo wombhalo, i-imeyili, noma ucingo olungekho. U…